ဒီတဈခါပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ အလှဆုံးပွုံးပွနိုငျတဲ့သူက ကိုယျဖွဈပါစေ – Shinyoon
ဒီတဈခါပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ အလှဆုံးပွုံးပွနိုငျတဲ့သူက ကိုယျဖွဈပါစေ
May 5, 2021 by Shin Yoon
ဒီတဈခါပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ အလှဆုံးပွုံးပွနိုငျတဲ့သူက ကိုယျဖွဈပါစေ ။
မလိုခငျြပါပဲ ရလာတဲ့လမျးခှဲတှမှော ကိုယျ ပွိုလဲခဲ့ဖူးတာပေါ့ … အရာရာမှာ နှလုံးသားနဲ့ရငျးထားတော့ နရောတကာ ရငျနဲ့အမြှ နာကငျြရတာဟာ သဘာဝ တဲ့ ။ ကိုယျမမှားခဲ့ပါပဲ ကိုယျခံစားရတာတှကေို ဒီနဒေီ့အခြိနျမှာပဲ ရပျတနျ့လိုကျခငျြပွီ ။ တဈနေ့ ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ အလှဆုံးပွုံးပွနိုငျတဲ့သူက ကိုယျဖွဈပါစေ ။
ကြှနျမ ရိုးသားခဲ့ဖူးတယျ …. သိပျခဈြတာကို သိပျခဈြတယျလို့ ပွောပွခဲ့ဖူးသလို သိပျကို ခဈြပွခဲ့ဖူးတယျ ။ လူတဈယောကျကို ခဈြတဲ့အခါ အဲ့ဒီလူရဲ့ဆိုးခွငျးကောငျးခွငျးတှကေို ခဈြတတျပေးရတယျတဲ့ အဲ့ဒီစကားတှကေို တကယျကွီး ယုံပွီး တကယျကွီး လိုကျနာခဲ့ဖူးတဲ့ ရူးပေါပေါကောငျမလေးပေါ့ … နားလညျမှုတှေ ပေးခဲ့ဖူးသလို ခဏခဏလဲ ခှငျ့လှတျခဲ့ဖူးပါတယျ ။
တဈနကေ့ရြငျတော့ နားလညျလာမှာပါဆိုတဲ့ မသခြောမှုကွီးကို သသေခြောခြာ ဆုတျကိုငျထားပွီး မရရောမှုတှကွေားမှာ ကြှနျမ ရူးခဲ့တာလေ … နောကျဆုံးရလာဒျကတော့ ကိုယျမြှျောလငျ့ထားသလို ပြျောရှငျစှာ ဇာတျသိမျးကွလသေတညျးမဟုတျပဲ … မဖွဈနိုငျတဲ့ ဇာတျလမျးကို ဒီမှာတငျ ဒီလို အဆုံးသတျကွတာပေါ့ ဆိုတဲ့ မပေါငျးရခွငျးတှဟော ဇာတျသိမျးခနျးပေါ့ ။
လှယျလိုကျတာလို့ … ရရှေတျရုံက လှဲလို့တခွားဘာမြား တတျနိုငျခဲ့မှာလဲ ကိုယျ ခဈြခဲ့တာ ကိုယျကိုယျတိုငျ သိခဲ့သလို ကိုယျဘယျလောကျခဈြခဲ့သလဲဆိုတာလဲ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ သိပါတယျ .. ကိုယျ့အနားရှိခဲ့တုနျးကလဲ အတတျနိုငျဆုံး ပြျောအောငျ ထားခဲ့သလို ကိုယျ့အနား မနခေငျြတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြိနျကရြငျလဲ ကနျြခဲ့ရတာပေါ့ …
တဈနနေ့ေ့ တဈခြိနျခြိနျမှာ အကွောငျးသငျ့လို့ပွနျဆုံကွရငျတော့ … အလှဆုံးပွုံးပွနိုငျတဲ့ ကြှနျမ ပဲ ဖွဈပါစေ .. အနညျးဆုံး ကြှနျမ အဆငျပွပေါတယျဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုးနဲ့ အနိုငျလေး ယူပါရစေ ။
ဒီတစ်ခါပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် အလှဆုံးပြုံးပြနိုင်တဲ့သူက ကိုယ်ဖြစ်ပါစေ ။
မလိုချင်ပါပဲ ရလာတဲ့လမ်းခွဲတွေမှာ ကိုယ် ပြိုလဲခဲ့ဖူးတာပေါ့ … အရာရာမှာ နှလုံးသားနဲ့ရင်းထားတော့ နေရာတကာ ရင်နဲ့အမျှ နာကျင်ရတာဟာ သဘာဝ တဲ့ ။ ကိုယ်မမှားခဲ့ပါပဲ ကိုယ်ခံစားရတာတွေကို ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပဲ ရပ်တန့်လိုက်ချင်ပြီ ။ တစ်နေ့ ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် အလှဆုံးပြုံးပြနိုင်တဲ့သူက ကိုယ်ဖြစ်ပါစေ ။
ကျွန်မ ရိုးသားခဲ့ဖူးတယ် …. သိပ်ချစ်တာကို သိပ်ချစ်တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ဖူးသလို သိပ်ကို ချစ်ပြခဲ့ဖူးတယ် ။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တဲ့အခါ အဲ့ဒီလူရဲ့ဆိုးခြင်းကောင်းခြင်းတွေကို ချစ်တတ်ပေးရတယ်တဲ့ အဲ့ဒီစကားတွေကို တကယ်ကြီး ယုံပြီး တကယ်ကြီး လိုက်နာခဲ့ဖူးတဲ့ ရူးပေါပေါကောင်မလေးပေါ့ … နားလည်မှုတွေ ပေးခဲ့ဖူးသလို ခဏခဏလဲ ခွင့်လွှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
တစ်နေ့ကျရင်တော့ နားလည်လာမှာပါဆိုတဲ့ မသေချာမှုကြီးကို သေသေချာချာ ဆုတ်ကိုင်ထားပြီး မရေရာမှုတွေကြားမှာ ကျွန်မ ရူးခဲ့တာလေ … နောက်ဆုံးရလာဒ်ကတော့ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားသလို ပျော်ရွှင်စွာ ဇာတ်သိမ်းကြလေသတည်းမဟုတ်ပဲ … မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဒီမှာတင် ဒီလို အဆုံးသတ်ကြတာပေါ့ ဆိုတဲ့ မပေါင်းရခြင်းတွေဟာ ဇာတ်သိမ်းခန်းပေါ့ ။
လွယ်လိုက်တာလို့ … ရေရွှတ်ရုံက လွဲလို့ တခြားဘာများ တတ်နိုင်ခဲ့မှာလဲ ကိုယ် ချစ်ခဲ့တာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိခဲ့သလို ကိုယ်ဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့သလဲဆိုတာလဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါတယ် .. ကိုယ့်အနားရှိခဲ့တုန်းကလဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ပျော်အောင် ထားခဲ့သလို ကိုယ့်အနား မနေချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်လဲ ကျန်ခဲ့ရတာပေါ့ …
တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အကြောင်းသင့်လို့ပြန်ဆုံကြရင်တော့ … အလှဆုံးပြုံးပြနိုင်တဲ့ ကျွန်မ ပဲ ဖြစ်ပါစေ .. အနည်းဆုံး ကျွန်မ အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ အနိုင်လေး ယူပါရစေ ။
ကိုယျဘယျလောကျထိ ခဈြခဲ့သလဲဆိုတာ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ သိပါတယျ …
ကြှနျမ ဖုနျးလေး အသကျမဲ့နခေဲ့တာ အတေျာ့ကို ကွာပွီ ။